ဆိတ်နှစ်ဖွား (၁၉၃၁၊ ၁၉၄၃၊ ၁၉၅၅၊ ၁၉၆၇၊ ၁၉၇၉၊ ၁၉၉၁၊ ၂၀၀၃၊ ၂၀၁၅၊ ၂၀၂၇) များအတွက် ဟောစာတမ်း - Barnyar Barnyar
March 2, 2022 Astrology 0
ဆိတ်နှစ်ဖွားများသည် တရုတ်ဒဏ္ဍာရီရာသီခွင်များထဲတွင် အဌမမြောက်သောနှစ်ဖွားများဖြစ်ကြသည်။ မိုးနတ်မင်းကြီးသည် ပါတီအစည်းအဝေးကိုရောက်ရှိလာသော ပထမ၁၂ကောင်ကို တစ်နှစ်တာရာသီခွင်အတိုင်း စီစဉ်ပေးမည်ဟုမိန့်တော်မူလေသည်။ သူငယ်ချင်းဖြစ်ကြသော ဆိတ်နှင့် သမင်တို့ဟာ ပါတီအစည်းအဝေးကိုတက်ရန် အတူတူထွက်ခွာလာလေသည်။
လမ်းတစ်ခုတွင် မြစ်ချောင်းခြားထားသောကြောင့် မြစ်ကိုဖြတ်ရန်လိုအပ်လာလေသည်။ ထိုအခါ သမင်သည် လက်လျော့၍ ကျန်ခဲ့လေသည်။ ဆိတ်ကား ကြိုးစားရုန်းကုန်၍ မြစ်ကိုဖြတ်သန်းသွားပြီး ပါတီသို့ရောက်သောအခါ နံပါတ် ၈ နေရာကို ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ထိုကြောင့် ဆိတ်သည် အဌမမြောက်သောနှစ်ဖွားအဖြစ်ဖြစ်လာလေသည်။
ဆိတ်များသည် မည်သည့်အခက်အခဲကိုမဆို ခံနိုင်ရည်ရှိကြသည်။ ဒါက သူတို့ရဲ့ အထင်ရှားဆုံး စရိုက်လက္ခဏာပါ။ သူတို့၏နူးညံ့သိမ်မွေ့မှုကို လှည့်စားနိုင်သော်လည်း ၎င်းတို့သည် သန်မာပြီး ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ သူတို့သည် သည်းခံစိတ်ကြီးမားပြီး အရာရာကိုမဆို စိတ်အားထက်သန်မှုရှိကြသည်။ အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်တော့မည်ဆိုပါက သေသေချာချာစဉ်းစားပြီးမှလုပ်လေ့ရှိသည်။
ကိစ္စတစ်ခုကိုဆုံးဖြတ်တော့မယ်ဆိုရင် ဘက်ပေါင်းစုံရှုထောင့်ပေါင်းစုံမှ သေသေချာချာကြည့်ရှုပြီးမှ ဆုံးဖြတ်တတ်သူများဖြစ်ကြသည်။ ကလေးများနှင့် တိရိစ္ဆာန်များကိုချစ်ခင်ကြသောသူများလည်းဖြစ်သည်။ နူးညံ့သိမ်မွေ့သောအရည်အချင်းကြောင့် မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများစွာရှိကြသည်။ သူတို့သည်ကိုယ်ချင်းစာတရားရှိပြီး အဲစိတ်တရားတွေကြောင့်အရာရာကို သည်းခံခွင့်လွတ်တတ်ကြသည်။
မီးဓာတ် (၁၉၆၇၊ ၂၀၂၇)
ဤနှစ်ဖွားများတွင် နွေးထွေးနူးညံ့သောစိတ်ထားရှိသည်။ ရိုးသားပြီး သစ္စာရှိသောသူများလည်းဖြစ်ကြသည်။ ငယ်ရွယ်စဉ်ဘဝဟာ မပြည့်စုံပဲ သင့်တောင့်သက်သာဘဝဖြင့်နေထိုင်ရန် လူလတ်ပိုင်းအရွယ် အချိန်တစ်ခုအထိစောင့်ဆိုင်းရမည်။ အခက်အခဲများအားလုံးပြီးဆုံးချိန်တွင် ကူညီစောင့်ရှောက်မည့်သူကို တွေ့ရမည်။ ဘဝမှာ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများ၏ ပံ့ပိုးမှုကိုလည်းလိုအပ်သည်။
တရားမျှတပြီး ရိုးသားသောသူများဖြစ်သည်။ သူတို့ရဲ့သက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်ဟာ ချောမွေ့ပြီးတည်ငြိမ်ပါသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများကတော့ အကျိုးမပေးပေ။ ဖြစ်နိုင်ချေအားလုံးကို ဆင်ခြင်ပါ လောဘမကြီးပါနဲ့။
ရွှေဓာတ် (၁၉၃၁၊ ၁၉၉၁)
နှိမ့်ချစွာနေတတ်ပြီး မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများအတွက် မိမိကိုယ်ကို စတေးတတ်သူများဖြစ်သည်။ သူတို့ကို အဆိုးမြင်နေရင်တောင်မှ တစ်ခြားသူတွေအတွက် အမြဲစဉ်းစားပေးတတ်သူများဖြစ်သည်။ သူတို့သည်အရမ်းထက်မြက်သောသူများဖြစ်သည်။ ငယ်စဉ်ကတည်းက ဂီတ နှင့် အနုပညာဘက်ကို ဝါသနာပါပါက ဤနယ်ပယ်တွင် အောင်မြင်နိုင်သောသူများဖြစ်သည်။
ရေဓာတ် (၁၉၄၃၊ ၂၀၀၃)
ကြင်နာတတ်ပြီး တာဝန်ယူမှုအပြည့်ရှိသောသူများဖြစ်သည်။ သူတို့ဟာပျော့ပြောင်းတယ်လို့ထင်ရပေမယ့် အမှန်တကယ်သန်မာကြသည်။ သူတို့ဟာ အစီအစဉ်တွေအတိုင်းသွားရတာကို နှစ်သက်ကြပြီး ရုတ်တရက်ပြောင်းလဲမှုတွေကို ကောင်းကောင်းမလုပ်တတ်ကြပါဘူး။ လုံခြုံသောငွေကြေးဖြင့် ငြိမ်သက်စွာနေထိုင်ကြသည်။ သို့သော် စစ်မှန်သော တည်ငြိမ်မှုသည် သူတို့၏ ငယ်ရွယ်ပြီးနောက် ဖြစ်ပေါ်လာသည်။
သစ်သားဓာတ် (၁၉၅၅၊ ၂၀၁၉)
ဖော်ရွေပြီး ယဉ်ကျေးသည်။ သူတို့သည် အလွန်စာနာတတ်ပြီး အခြားသူများကို ကူညီရန် အမြဲအသင့်ရှိကြသည်။ သို့သော်၊ သူတို့သည်အခြားသူများကိုမလိုအပ်ပါ။ အိမ်ထောင်ကျရင်တောင် တစ်ယောက်တည်း နေရတာကို နှစ်သက်ကြတယ်။ သူတို့ဟာ ပြည်တွင်းမှာထက် သူတို့ရဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းကို နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ တိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့ ပိုသင့်တော်ပါတယ်။
ဆိတ်နှစ်ဖွား အမျိုးသားများသည် စစ်မှန်သော အမျိုးကောင်းသားများ ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့သည် မိသားစုကို ဦးစားပေးကြပြီး စိတ်ရင်းမှန်ဖြင့် ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရှိသည်။ သူများတွေ ဒုက္ခရောက်တဲ့အခါ တတ်နိုင်သလောက် ကူညီကြသည်။
သူတို့ဟာ သူတို့ကိုယ်သူတို့ အရမ်းဖိအားပေးတာကို မကြိုက်သလို တခြားသူတွေကိုလည်း မဝေဖန်တတ်ပါဘူး။ အငြင်းအခုံဖြစ်နေစဉ်တွင် ၎င်းတို့သည် ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဖန်တီးပေးလေ့ရှိသည်။ သင့်တော်တဲ့အချိန်တွေမှာ အကြံဉာဏ်တွေ ပေးတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့က အဆိုးမြင်တတ်တယ်။ အရာတွေရဲ့ အကောင်းဘက်ကို မြင်ဖို့ ခက်ပြီး ဒါက သူတို့ကို စိတ်ရှုပ်စေတယ်။
ဆိတ်နှစ်ဖွား အမျိုးသမီးများသည် ယုံကြည်စိတ်ချရပြီး ဂရုတစိုက်ရှိကြသည်။ အသေးငယ်ဆုံးသောအသေးစိတ်အချက်များပင် သူတို့၏မျက်လုံးများမှ လွတ်ကင်းနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ ၎င်းတို့သည် လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြီး အခြားသူများ၏ လိုအပ်ချက်များကို အာရုံခံစားနိုင်ကြသည်။
ဤအမျိုးသမီးများသည် မြင့်မားသောစံနှုန်းများအတွက် ရည်မှန်းပြီး စည်းစနစ်တကျနေထိုင်ကြသည်။ သို့သော် ၎င်းတို့သည် စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ ဖြစ်နိုင်ပြီး မကြာခဏ လုံခြုံမှုမရှိဟု ခံစားရတတ်သည်။ သူတစ်ပါးအပေါ် ကြင်နာမှု ရှိသော်လည်း၊ သူတို့သည် ခက်ခက်ခဲခဲ နေတတ်ကြပြီး ကျေနပ်မှု မရှိကြပေ။
၂၀၂၂ခုနှစ်အတွင်း ဆိတ်နှစ်ဖွားများအတွက် ကံကောင်းစေသောအရာများမှာကား
ကံကောင်းစေသောအရောင် – အစိမ်းရောင်၊ အနီရောင်၊ ခရမ်းရောင်, ကံကောင်းစေသောနံပါတ် – ၂၊ ၈၊ ၉
ကံကောင်းစေသောရတနာ -Crystal ၊ မြ, ကုသိုလ်ပြုရန်ကောင်းသောအရပ် – မြောက်၊ အနောက်မြောက်
ကြွယ်ဝချမ်းသောမှုရှိသောအရပ် – အနောက်တောင်, ချစ်ခြင်းမေတ္တာပြည့်စုံသောအရပ် – မြောက်ဘက်
၂၀၂၂ခုနှစ်အတွင်း ဆိတ်နှစ်ဖွားများအတွက် ကံမကောင်းစေသောအရာများမှာကား
ကံမကောင်းစေသောအရောင် – ရွှေရောင်၊ အညိုရောင်၊ အနက်ရောင်, ကံမကောင်းစေသောနံပါတ် – ၆၊ ၇
ဆိတ်များသည် အခြားသူများကို ကူညီခြင်းနှင့် စောင့်ရှောက်ခြင်းကို နှစ်သက်သည်။ ထို့ကြောင့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွင် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုခြင်းသည် သင့်လျော်ပါသည်။ ၎င်းတို့သည် သူနာပြု၊ အိမ်စောင့်နှင့် အခြားဆက်စပ်အလုပ်များအဖြစ် သင့်လျော်သည်။
အသေးအမွှားအသေးစိတ်တိုင်းကို ဂရုစိုက်ပြီး သူတို့ရဲ့ နှလုံးသားတစ်ခုလုံးကို ထည့်သွင်းပေးပါလိမ့်မယ်။ သူတို့သည် ဉာဏ်ကောင်းပြီး သိမ်မွေ့သောကြောင့် ဆိတ်များသည်လည်း အနုပညာအတွက် အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ကြပါသည်။ အခြားလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်နှင့် တည်ငြိမ်သောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းများတွင် စာစီစာရိုက်ဆရာများနှင့် ဆရာများပါဝင်သည်။
ပြင်ပလွှမ်းမိုးမှုတွေ အများကြီးရှိမှာကို စိုးရိမ်စရာမရှိပါဘူး။ ယင်းက ဆိတ်များသည် အလုပ်များကို ကောင်းစွာလုပ်ဆောင်ရန် အာရုံစိုက်နိုင်စေပါသည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် ဆိတ်များသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် မီဒီယာကဲ့သို့သော အပြိုင်အဆိုင် အလုပ်အကိုင်များကို မကြိုးစားသင့်ပါ။ ပြင်းထန်သော ပြင်းထန်မှုသည် ၎င်းတို့အား စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုနှင့် စိုးရိမ်မှုထဲသို့ တွန်းပို့လိမ့်မည်။
ဆိတ်များသည် ရာသီခွင်တိရိစ္ဆာန်များတွင် ကျန်းမာသောအကောင်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းတို့သည် အားနည်းပြီး ရာသီအပြောင်းအလဲကြောင့် ၎င်းတို့၏ ကျန်းမာရေးကို လွှမ်းမိုးထားသည်။ သို့သော် သူတို့၏ စိတ်ဓာတ်သည် အကြီးမားဆုံး လွှမ်းမိုးမှုဖြစ်သည်။
သူတို့ဟာ စိတ်ပျက်အားငယ်ပြီး ဖိစီးနေတတ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့အသေးစိတ်လက္ခဏာတွေကြောင့် အသေးဆုံးပြဿနာတွေက သူတို့ရဲ့အာရုံကိုဖမ်းစားနိုင်ကြပါတယ်။ ဒါက သူတို့ကို အဆက်မပြတ် ပြင်းပြင်းထန်ထန် စိတ်ပူစေတယ်။ မလွဲမသွေ ဖျားနာမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်။ ဆိတ်များသည် အအေးမိခြင်းကို ခံစားရတတ်သည်။
လည်ချောင်းနာခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့် နှာရည်ယိုခြင်းတို့သည် အဖြစ်များသော လက္ခဏာများဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် နှလုံးပြဿနာများ ဖြစ်နိုင်ခြေ မြင့်မားသည်။ ချမ်းအေးတဲ့ရာသီဥတုမှာ ဆိတ်တွေက နွေးနွေးထွေးထွေး ဝတ်ဆင်ထားရမယ်။ နွေရာသီတွင် ၎င်းတို့သည် ကူးစက်တတ်သောရောဂါများ ကျရောက်တတ်သည်။ ထို့နောက် အေးသောအစာကို စားသုံးရန် အကြံမပြုပါ။
၂၀၂၂ခုနှစ်တွင် ဆိတ်နှစ်ဖွားများ ဘာဖြစ်လာမလဲ ?
၂၀၂၂ ခုနှစ်သည် နောက်ဆုံးတွင် ဆိတ်များအတွက် ကံကောင်းသောနှစ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ယခင်နှစ်က Fan Tai Sui ၏ အပျက်သဘော လွှမ်းမိုးမှုများ လုံးဝ ပျောက်ကွယ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ ဆိတ်များသည် ယခုနှစ်တွင် ကံကောင်းသော ကြယ်များစွာဖြင့် မင်္ဂလာရှိကာ ၎င်းတို့လုပ်သမျှ အထူးသဖြင့် အလုပ်နှင့် အချစ်ရေးတွင် ကောင်းမွန်သော အထောက်အပံ့များ ပေးစွမ်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
၎င်းတို့၏ ကျန်းမာရေးနှင့် ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုသည် ပြီးပြည့်စုံသော ကဏ္ဍများထက် အနည်းငယ်နည်းသော အပျက်သဘောဆောင်သော သက်ရောက်မှုများကြောင့် ထိခိုက်နိုင်သော်လည်း အများစုမှာ 2022 သည် အလွန်ချောမွေ့ပြီး ရှင်သန်ကြီးထွားလာမည်ဖြစ်သည်။
အချစ်ဘဝသည် တစ်ကိုယ်ရေသမားများနှင့် အိမ်ထောင်ရေးရှိနှင့်ပြီးသားသူများအတွက် 2022 ခုနှစ်တွင် အဆင့်မြှင့်တင်ရန် လျာထားမည်ဖြစ်သည်။ လူအချင်းချင်း ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး အလုံးစုံ ကောင်းချီးပေးမည်။ တည်ငြိမ်သောဆက်ဆံရေးရှိပြီးသားသူများသည် 2022 တွင်လက်ထပ်ရန်ဆုံးဖြတ်ကြသည် သို့မဟုတ် အနည်းဆုံး ၎င်းတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့် အကြံဉာဏ်ကို ဆွေးနွေးကြလိမ့်မည်။
တော်တော်များများက ဒီနှစ်ကုန်မှာ အံ့အားသင့်စရာကောင်းတဲ့ မင်္ဂလာပွဲတွေတောင် ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ ယခင်က စံနှုန်းထက်နည်းသော သို့မဟုတ် တည်ငြိမ်သောဆက်ဆံရေးရှိသူများသည် ဆက်ဆံရေးကို ပြုပြင်နိုင်ပြီး ၎င်းတို့၏အချစ်ရေးတွင် ပိုမိုပျော်ရွှင်သောနေရာသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ပြင်ပသွေးဆောင်မှုတွေ ရှိနိုင်ပေမယ့် အဆုံးမှာတော့ အားလုံးအဆင်ပြေသွားမှာပါ။
ဘဝ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုတွေ့ဆုံရန်ပိုမိုအားဖြည့်ပေးသောကြောင့်တစ်ကိုယ်တော်များသည်ယခုနှစ်တွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောကံများရလိမ့်မည်။ ငယ်ချင်းများ၏အကူအညီဖြင့် ယခုနှစ်တွင် စတင်လုပ်ဆောင်ရန် သတ္တိရှိမှုကို တွေ့ရှိမည်ဖြစ်သည်။ တစ်နည်းဆိုရသော် ဆိတ်များသည် ယခုနှစ်တွင် သူတို့နှစ်သက်သော တစ်စုံတစ်ဦးနှင့် တွေ့ဆုံပြီးနောက် ပထမဆုံး လှုပ်ရှားမှုကို ပြုလုပ်ရန် အားပေးခံရသည်။
ရုံးဝန်ထမ်းများအတွက်၊ 2022 တွင် သင့်သူဌေးသည် အဖွဲ့အတွက် သင်၏ထူးခြားသောပံ့ပိုးကူညီမှုကို နောက်ဆုံးတွင်တန်ဖိုးထားလိမ့်မည်ထင်သည်။ ခေါင်းဆောင်မှုရာထူးတွင်ရှိသော ဆိတ်များအတွက်၊ သင်သည် သင်၏ခြေလှမ်းကို လှမ်းနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး၊ သင်လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိသော ခေါင်းဆောင်မှုပုံစံကို ရှာတွေ့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
မနာလိုသောပြိုင်ဘက်များသည် အောင်မြင်မှုခဏတာတွင် သင်သတိမထားမိနိုင်သော ထောင်ချောက်များကို သင့်အတွက် ထောင်ချောက်များချမှတ်ထားနိုင်စေမည်၊ . ထို့အပြင်၊ ဤနှစ်သည် အလုပ်ပြောင်းရန် အကောင်းဆုံးနှစ်မဟုတ်ပါ၊ ဆိတ်များသည် စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့် နုတ်ထွက်လိုခြင်းအတွက် သတိထားရန် လိုအပ်ပေမည်။ သင့်မှာရှိနေတဲ့ အလုပ်မှာ ဆက်ပြီး အလုပ်ကြိုးစားဖို့ အကြံပြုထားပါတယ်။
ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုသည် ဆိတ်များအတွက် 2022 တွင် ပြီးပြည့်စုံသည်ထက် နည်းသော်လည်း မကြာသေးမီနှစ်များကို သုံးသပ်ပါက မဆိုးသေးပါ။ ဂရုမစိုက်ဘူးဆိုရင် သင့်ငွေကိစ္စတွေကို ထိခိုက်စေတဲ့ ကံဆိုးတွေကို ဒီနှစ်မှာ ဖယ်ရှားပစ်သင့်ပါတယ်။ အမြဲတမ်း ချောမွေ့နေမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြင်ဆင်ထားပါ။ 2022 ခုနှစ်တွင် ငွေကြေးကို ဂရုတစိုက် စီမံခန့်ခွဲရမည်။
ဆိတ်များသည် များများစားစား မသုံးတတ်ဟု ခံစားမိသော်လည်း သေးငယ်သော အသုံးစရိတ်များစွာက သင့်ကို အံ့အားသင့်စေနိုင်သည်။ သင့်ရန်ပုံငွေများကို ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ ခွဲဝေပေးပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများတွင် အလွန်အမင်း မြင့်မားသော အန္တရာယ်များကို ရှောင်ရှားပါ။ တခြားနေရာတွေမှာ သင့်မှာ ကံကောင်းခြင်းတွေရှိနေတယ်၊
ဇွဲလုံ့လနှင့် သင်ယူလိုစိတ်ပြင်းပြလာမည်ဖြစ်ပြီး ရလဒ်ကောင်းများရရှိမည်ဖြစ်သည်။
2022 ခုနှစ်တွင် အထွေထွေကျန်းမာရေးကို ခံစားရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အကောင်းမြင်စိတ်ရှိနေပါက ယခုနှစ်တွင် ကြီးကြီးမားမား အံ့အားသင့်စရာများ ရှိလာမည်မဟုတ်ပါ၊ ယင်းသည် လုပ်ဆောင်ရန် ခက်ခဲမည်မဟုတ်ပါ။ အရင်ကတည်းက ကြီးကြီးမားမား ဖျားနာနေသူတွေအတွက် 2022 မှာ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာနိုင်ပါတယ်။
ယခုနှစ်တွင် ၎င်းတို့၏ ဓနဥစ္စာများ တိုးမြင့်လာသည်နှင့်အမျှ ဆိတ်များသည် ကြွယ်ဝသော အစာနှင့် အရက်ကို စားသုံးနိုင်သည့် လူမှုရေးဆိုင်ရာ အခမ်းအနားများကို တက်ရောက်ရန် ပိုများလာနိုင်သည်… ၎င်းသည် အထူးသဖြင့် သွေးတိုးရှိသူများ အထူးသတိထားရမည့် အရာဖြစ်သည်။
သတိထားရမယ့်အချက်ကတော့ ခရီးသွားခြင်းပါပဲ။ ဆိတ်များသည် လေယာဉ်ဖြင့်ဖြစ်စေ ကားဖြင့်ဖြစ်စေ ခရီးဝေးသွားလာရန် အကောင်းဆုံးနှစ်မဟုတ်ပေ။